ओली–कोइरालाले हस्ताक्षर गर्ने , एमालेले कांग्रेसलाई राष्ट्रवाद सिकाउने - नेता डा.शेखर कोइराला
काठमाडौं, १५ पुस । ओली–कोइरालाले हस्ताक्षर गर्ने , एमालेले कांग्रेसलाई राष्ट्रवाद सिकाउने नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले एमालेको उग्रराष्ट्रवादले अन्त्यमा उसैलाई सिध्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा शुक्रबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै कांग्रेस नेता डा.कोइरालाले एमालेलाई सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा आउन आग्रह गरे ।
‘उग्रराष्ट्रवादको कुरा गरेर एमालेलाई फाइदा हुँदैन । राष्ट्रवादको नाराले एमाले सकिन्छ’, उनले भने, ‘उग्रराष्ट्रवादको नाराले देशलाई पनि समस्यामा पार्छ ।’
संसद अबरोध गरेकोमा एमालेप्रति रुष्ट बनेका कांग्रेस नेता डा.कोइरालाले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल गराउनु छ भने संसदबाट फेल गराइदिए भइगयो नि ? किन सदनमा अबरोध गर्ने ?’
संसदीय प्रक्रियामा सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमालेलाई पनि विश्वासमा ल्याउनु पर्ने बताएका कांग्रेसका नेता डा.कोइरालाले भने, ‘एमालेविना संविधान कार्यान्वयन कठीन छ । एमाले पनि सहमतिमा आउनु पर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । निकास दिनै पर्छ ।’
नेता डा.कोइरालाले भने, ‘के हो राष्ट्रघात ? यही प्रस्ताव केपी ओलीले ल्याउँदा हुने ! अरुले ल्याउँदा राष्ट्रघाती कसरी भयो ? ओलीजीले १७ कात्तिक ०७१ मा यही प्रस्तावमा सुशील कोइरालासँग सँगै हस्ताक्षर गरेका होइनन् ?’
‘कांग्रेसलाई एमालेले राष्ट्रवाद सिकाउने होइन’, उनले भने, ‘राष्ट्रवादको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । कड्किदै उनले भने ।
हामी त कम्युनिष्ट नै मान्दैनौँ ,शब्दशैयामा सुतेर मात्रै हुँदैन, नतिजा आउनुपर्छ’
देउवाजी पार्टीको नेतृत्व गर्न असक्षम भइसक्नु भयो : सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस